Queens, Amandla, kunye nabaPhathi baBawo 1800-1899
AmaQueens aMandla, amaKhosi kunye nabaLawuli beNtombi 1801-1900
U-Queen Victoria, Prince Albert, kunye nezingane zabo ezi-5. (Charles Phelps Cushing / ClassicStock / Getty Izithombe)
Ngenkulungwane ye-19, njengoko iinxalenye zehlabathi zibone iinguqulelo zentando yesininzi, kwakukho namabhinqa amancinci amakhosikazi awenzayo umda kwimbali yehlabathi. Ba obani abanye ba bafazi? Apha sibheke uluhlu oluphambili lwexesha le-19 leminyaka labasetyhini abalawulayo (ngokuzalwa komhla).
U-Queen Victoria, 1861. (UJohn Jabez Edwin Mayall / Hulton Archive / Getty Izithombe)
Waphila: uMeyi 24, 1819 -Januwari 22, 1901
UkuBusa: ngoJuni 20, 1837 -Januwari 22, 1901
I-Coronation: NgoJuni 28, 1838
U-Queen of Great Britain, uVictoria wamnika igama kwixesha leNtshona. Wabusa njengoMongameli waseBrithani ebudeni ngexesha lolawulo zombini kunye nentando yeninzi. Emva kowe-1876, wathatha isihloko esithi Empress of India. Wayetshata nomzala wakhe, uPrince Albert waseSaxe-Coburg noGotha, iminyaka engama-21 ngaphambi kokufa kwakhe, kunye nabantwana babo batshata nabanye ubukhosi baseYurophu kwaye badlala indima enkulu kwimbali yekhulu le-19 nele-20 leminyaka.
U-Queen Victoria - Okufuneka Ukwazi
Abantwana baka-Queen Victoria kunye nabazukulu
Isabella II waseSpain
Umfanekiso we-Isabella II waseSpain nguFederico de Madrazo y Kuntz. (Hulton Fine Art Collection / Imifanekiso emihle yezobugcisa / iifayile zeMveli / i-Getty Images)
Waphila: Oktobha 10, 1830 - ngo-Apreli 10, 1904
Ukuphumelela: Septemba 29, 1833-Septemba 30, 1868
Ukugqitywa: NgoJuni 25, 1870
U-Queen Isabella II waseSpain wayenelungelo lokudla ifa letrone ngenxa yesigqibo sokubeka eceleni uSalic Law , apho amadoda kuphela angaba nefa. Inxaxheba ka-Isabella kwi-Affair yeMitshato yaseSpain yongezwa kwi-intanethi yeYurophu ye-19. Ubugunyazi bakhe, ukunyaniseka kwakhe kwenkolo, ukunyelisa ngamabhinqa omyeni wakhe, ukusebenzisana kwakhe nempi, kunye neengxabano zokulawula kwakhe kunceda ukuzisa i-Revolution ka-1868 eyamthumba eParis. Wayekhawuleza ngo-1870 ngenxa yonyana wakhe, uAlfonso XII.
Imephu ye-1850 ebonisa ubukumkani buka-Akan yaseAshanti ngaphakathi kwiphondo laseGuinea kunye nemimandla ejikelezile eNtshona Afrika. (U-Thomas Milner / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)
UkuBusa: 1834 - 1884?
UAfua Koba wayeyi-Asantehemaa, okanye u-Queen Queen, we-Ashanti Empire, isizwe esilawulayo eNtshona Afrika (ngoku iNingizimu Afrika). I-Ashanti yabona ubudlelwane njengowomtshato. Umyeni wakhe, oyintloko, nguKwasi Gqalabi. Wabiza oonyana bakhe njengo-asantehene okanye oyintloko: uKofi Kakari (okanye uKarikari) ukususela ngo-1867 ukuya ku-1874, kunye no-Mensa Bonsu ukususela ngo-1874 ukuya ku-1883. Ngethuba lakhe, uAshanti walwa neBrithani, kuquka ne-bundu yegazi e-1874. kunye nabaseBrithani, kwaye ngenxa yoko, intsapho yakhe yachithwa ngowe-1884. AbaseBrithani babathumba iinkokheli ze-Ashanti ngo-1896 baza bathatha ulawulo lwamaqoloni kuloo ndawo.
I-Impress Dowager Cixi (nayo iguqulelwe nguTz'u Hsi okanye i-Hsiao-ch'in)
I-Empowerer Empress Cixi ukusuka kwimifanekiso. I-China Span / iKeren Su / Getty Izithombe
Waphila: NgoNovemba 29, 1835 - Novemba 15, 1908
Regent: Novemba 11, 1861 - Novemba 15, 1908
UMkress uCixi waqala njengomfazi omncinci omncinci waseHsien-feng (Xianfeng) xa waba ngumntwana wonyana wakhe wedwa, waba ngu-regent kule ndodana xa ikosi yafa. Le nyana yafa, kwaye wayenomntakwabo ogama lakhe lingumyeni. Emva kokuba u-co-regent efa ngo-1881, waba ngumlawuli weChina. Amandla akhe okwenene ayedlula omnye woMsindisi omkhulu owayengumhla wakhe, uEstre Victoria.
UKumkani uLuli'ualani waseHawaii
Umfanekiso we-Queen Lili'uokalani wathathwa ngowe-1913. (UBernice P. Ibhishophu yaseMbhishophu / i-Wikimedia Commons)
Waphila: Septemba 2, 1838 - Novemba 11, 1917
UkuBusa: uJanuwari 29, 1891 - Januwari 17, 1893
U-Queen Lili'uokalani wayengumlawuli wokugqibela wobukumkani baseHawaii, obusa ngowe-1893 xa ubukumkani baseHawaii bupheliswa. Wayengumqambi weengoma ezingaphezu kwe-150 ngeziqithi zaseHawaii kwaye yaguqulelwa kwisiNgesi iKumulipo, Creation Chant.
Quily Marilyn Quotes
Iimfazwe zeNtsholongwane yamaFulentshi / iMpi yamaNapoleon: I-Vice Admiral Horatio Nelson
USanta Clotilde: iNdlovukazi yaseFrank naseSaint
Uvavanyo lweSalm Witch: Ibali likaMarta Corey
Quotes Amelia Earhart
Edward Bishop kunye noSara Bishop
I-BYU-Idaho GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Njani kwaye Kutheni Amaseli ahamba
Isikhokelo kwiMineral Delicate Sulfate
Iingcebiso malunga nendlela yokufunda isiTshayina
Imbali kaKumkani Arthur kwiFilimu
Iyiphi iNqanaba leManzi elungileyo kwiChibi lam Nxweme?
Kutheni Abantu Bakhohlisa?
IYunivesithi yaseGeorge Washington
Amandla okuLwazi lokuFunda nokuBhala
Uburhulumente obujongene nobuGebedu e-Iran
Oko Kufuneka Ukwazi NgoHlolo oluPhezulu
IZikolo zeeMpi zase-US
Ukufomatha i-PHP Text
Iinkcukacha NgeBaboquivari Peak
Ukuzivocavoca kwakhona kweGolfers